Transfer WiFi File Android: Saxiixa Android Files via WiFi
> Resource > Android > Transfer WiFi File Android: Saxiixa Android Files wirelessly
Marka ay timaado in ay soo gudbiyaan kala iibsiga u dhaxeeya Android iyo PC, waxa ugu horeeya ee aad ka u badan tahay in la sameeyo waa in la raadiyo cable USB ah. Guud ahaan, Waxa ay si fiican u shaqaynayaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aadan haysan cable USB ah, ama cable USB waa jabay ama laga badiyay. Aad doonaysid in aad wareejiso file Android inta aysan qaadan mid cusub. Ama, waxaad uun ka heli daalay cable USB ah qaadashada idin la, oo ay doonayaan in ay isku dayaan hab sahlan - xiriir WiFi. Marka xaaladaha, waxa ay u muuqdaan, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isku daydo Android kala iibsiga file WiFi.
Waxaa tahay barnaamijyada qaarkood laga heli karaa in la sameeyo kala iibsiga file wireless Android. Iyaga ka mid ah waa Wondershare MobileGo for Android . Way fududahay in la isticmaalo, dhakhso ah oo ka shaqeeya sida sixir markii cable USB ma waa dhow dahay. Iyada oo ay caawimo, aad awoodaan in ay geliyaan oo soo bixi files kala duwan oo ay ku jiraan music, xiriirada, sawiro iyo ka badan si uu / ka phone Android ama kiniin via WiFi bey u fududayd.
Qaybta 1. WiFi Connection
Qaybta 2. file kala iibsiga Android badan WiFi
Qaybta 3. More feature badan Android file kala iibsiga wirelessly
Qaybta 4. Verdict
Download iyo rakibi barnaamijkan kombuutarka. Waxaa Launch.
Wondershare MobileGo for Android Waa barnaamijka desktop ah. Ka hor inta samaynayaan kala iibsiga file WiFi ee Android, waa in aad hubiso in aad ku rakibtay app MobileGo ku saabsan telefoonka Android ama kiniin. Keliya marka app Mobile Tag ee lagu rakibay waxaad isticmaali kartaa barnaamijka desktop MobileGo for Android.
Dhab ahaantii, waxaa barnaamijka sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso files Android adigoo isticmaalaya cable USB ah. Aad isticmaasho barnaamijkan la cable USB Markii ugu horeysay, app MobileGo si toos ah lagala soo bixi doonaa oo lagu rakibay qalabka Android aad. Si kastaba ha ahaatee, Haddii aad dooratid in xidhiidhka ka wireless sida aad isku day hore, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo rakibi app this naftaada by.
Download app MobileGo halkan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad si toos ah u soo bixi app MobileGo qalabka Android aad, akhri halkan .
Ka dib markii ay ku rakibidda app MobileGo ah, waa in aad ka jaftaa qalabka Android aad. Lambarka sirta QR on suuqa kala xiriir kombuutarka ah. Markii uu dhamaystay, qalab Android aad muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa hoose.
On column ka tagay ee suuqa hoose waxaa ka mid ah isha. By gujinaya Apps , Music , Videos , Xiriirada , SMS iyo Photos siday u kala horreeyaan, waxaad ka heli suuqa kala maamulka.
Bedelka files ka Android inay PC:
Riix Music / Videos / Photos > Dooro music, videos ama sawiro> Riix dhoofinta inay u dhoofiyaan music / videos / photos in PC.
Riix Apps > barnaamijyadooda Select> Riix dhoofinta
Click Xiriirada > Hubi xiriirada aad doonayay> Riix Import / Dhoofinta > Dooro dhoofinta soo xulay xiriirro si computer / Dhoofinta dhammaan dadka ay khuseyso in computer > in file vCard .
Riix SMS > Dooro SMS> Riix Import / Dhoofinta > Riix dhoofinta xulay SMS si computer ama dhoofinta dhan SMS si computer > Save SMS sida file TXT ama XML ah.
Files Import ka PC in Android:
Riix Music / Videos / Photos > Riix dar in lagu daro aad jeceshahay songs, videos ama sawiro qalab Android aad.
Riix Apps > Riix rakib si loo soo dajiyo barnaamijyadooda.
Riix Xiriirada > Riix Import / Dhoofinta > Riix xiriirada Import ka computer > Dooro ka file vCard .
Riix SMS > Riix Import / Dhoofinta > Riix Import SMS ka computer > file XML Import. (Oo keliya ayaa file XML dhoofinaysay barnaamijkan la keeno karo.)
Feature Qaybta 3. In ka badan kala iibsiga file Android wirelessly
Cid u dir oo SMS ka computer jawaabin telefoonka Android .
Midowdo xiriir la koobi.
Beddelaan audio iyo video in Android qaabab saaxiibtinimo.
Xiriirada Transfer dhexeeya phone Android iyo Outlook , Windows Cinwaanka Book ama Windows Live Mail.
Nidaameed Lugood playlists in phone Android ama kiniin iyo qeybsanaan.
Share barnaamijyadooda la Facebook, Twitter iyo SMS saaxiibo aad.
Mid ka mid ah click in gurmad file qalabka Android oo ku soo celiyo fudayd
Download music, barnaamijyadooda iyo videos ka Google Play, Youtube, Wontube MP3 Download iyo websites ka badan.
Calan aad song jecel sida ringtone ah.
Wondershare MobileGo for Android Wuxuu u shaqeeyaa ganaax marka dhammaan noocyada kala duwan ee files wareejinta ka ama si phone Android ama kiniin badan WiFi. Its maamulka awooda badan ee dhammaan faylasha Android kulmay baahidaada kala duwan oo ku darayaa badan oo xiiso leh si aad nolosha mobile.